ISIKHOKELO SEMINECRAFT REALMS | KONKE OKUFUNEKA UKWAZI UKUZE UZILUNGISELELE- IRADIO TIMES - IMIDLALO
Isikhokelo seMinecraft Realms: Yonke into ofuna ukuyifumana ukuze usete
Konwabele ukuchitha ixesha kwilizwe elibonakalayo leMinecraft kodwa kungaphantsi kubo bonke abantu abangahambiyo abangathunyelwa yi-intanethi kwicala lakho? Emva koko iMinecraft Realms iya kuba yeyakho!
Inkonzo yokubhalisela isendaweni ukuze ube neseva apho kuphela ngabo ubamemayo abanokungena kwaye badlale- kwaye okungcono kukuba awudingi ukuba kwi-intanethi ukuze abahlobo bakho bajoyine- ke akukho xinzelelo lokuba uhlala uhlala ukudlala.
Ufuna ezinye iiMinecraft? Jonga izikhokelo zethu indlela yokulawula i-fox kwi-Minecraft , nendlela yokwenza Yenza umkhondo we-ray kumakhi webhloko.
Kodwa buyela kwiiRealms kwaye konke okufuneka ukwazi malunga nabo, funda ku!
Yintoni iMinecraft Realms?
Njengoko sele kukhankanyiwe, iMinecraft Realms yiseva yabucala yabadlali abaninzi onokuyicwangcisa, ngendleko esiza kuza kuyo kungekudala, ukuze udlale umdlalo kunye nabahlobo bakho kwaye ngaphandle kokufumana ithuba lokuba nabani na ajoyine- konke kwenziwa ngokumema kuphela .
Unokongeza umhlaba okhoyo kwiiRealms okanye ungenza enye entsha kwaye iserver iya kuba kwi-intanethi okoko uyihlawulelayo-ke ngenxa yokuba unqamle oko akuthethi ukuba umhlaba awunakufikeleleka nakubani na ndimeme. Kwaye unamandla okukhaba nabani na onokuba yingxaki ke yindawo ekhuselekileyo yabadlali abancinci.
Ngaphandle koHlelo lweJava, iMinecraft Realms yi-crossplay ngenxa yoko ayinamsebenzi ukuba yeyiphi ikhonsoli okanye isixhobo somntu odlala umdlalo njengoko bezokwazi ukukujoyina.
Eyona nto iphosakeleyo kukuba iimods ezintsha azinakwenziwa ukuba zisetyenziselwe- kodwa iminwe yethu iwele ukuba eli nqaku liya kongezwa ngolunye uhlobo kamva.
Yimalini iMinecraft Realms?
Kuye kwathiwa ezona zinto zibalulekileyo ebomini zikhululekile, kodwa ngelishwa, loo nto ayiguquleli kwiMinecraft Realms.
Ukuthi nangona kunjalo, kubadlali abazinikeleyo beMinecraft phakathi kwethu ayisiyo indleko ephezulu kakhulu yokusebenzisa iRealms njengoko iya kukubuyisela umva nge- £ 6.69 yabadlali abali-10 ngenyanga.
Ukuhlawula oku kuya kukufumanela okungakumbi, njengokufikelela kwiipakethe zeNtengiso ezingaphezulu kwama-50 kubandakanya izikhumba ezitsha, imidlalo emincinci kunye neemephu- ke ufumana okuninzi ngento oyihlawulayo kwaye ungarhoxisa nanini na uthanda.
Ungayilungisa njani impungutye kwiMinecraft
Ugqirha Ngubani uthotho lwezihloko ezi-8 ziphinde zenziwa eMinecraft
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Umdlalo wevidiyo kaMandalorian ekuxelwe ukuba uphuhliso
Uyicwangcisa njani iMinecraft Realms
Ukuqala emva koko, kuya kufuneka uthathe isigqibo malunga nokuba ufuna ukuba liphi ilizwe lakho kwaye lisusela kuyo yonke into ukuya kwinto ekuya kubizelwa kuyo kubunzima bokuseta.
Nje ukuba zonke iisetingi zakho zigqitywe kwaye zongezwe, ngoku kuya kufuneka ukhethe ukhetho olubizwa ngokuba yiYila kwiiRealms oya kuthi uzibone ekunene kukhetho lwe-Yenza. Nje ukuba wenze njalo uyakufumana ukhetho lomdlali wehlabathi om-2 okanye umhlaba womdlali o-10, ke thatha into oyikhethileyo kwaye uya kunikwa ezinye ii-T no-C zokufunda nokwamkela.
Kodwa yindlela elula ngayo kwaye wakube ukwenzile oko ungaqala ukudlala ngokukhawuleza.
Ukutshintsha iisetingi zeMinecraft Realms
Ubunzima, imo yomdlalo, igama lehlabathi lakho kunye nazo naziphi na iindlela zokukhohlisa ofuna ukuba zibandakanywe zonke zinokongezwa ngokucinezela iqhosha lokuhlela ecaleni kwehlabathi lakho kwaye uya kubona zonke iindlela onokukhetha kuzo.
Ukumema abahlobo kwiiMinecraft Realms
Kulungile ukufumana into ngaphandle kwendlela kuqala, nabaphi na abahlobo obamemayo akufuneki babhalise ngokubonakalayo kwiiRealms-ke ngoko mema nabani na onekopi yomdlalo ofuna ukubandakanyeka kuwo kwihlabathi lakho elitsha.
Kuxhomekeka kubhaliso lwakho, unokuba nabadlali aba-2 okanye abali-10 kwaye ubameme, khetha u-Hlela ecaleni kwe-Realm world yakho kwaye ukhethe amalungu. Emva koko khetha nokuba ngubani ofuna ukuba simenywe kuye - kulula!
Ukuxhasa umhlaba wakho we-Minecraft Realms
Ukuba ufuna ukuqala umhlaba omtsha kodwa awukulungelanga ukuvalelisa kweli lakho lakudala emva koko ukuxhasa esele ikho kuyinto eyimfuneko- ngethamsanqa nangona oku kulula ukwenza! Landela nje le miyalelo!
Cofa uhlele ecaleni kwehlabathi lakho laseMazantsi uze ukhethe 'Ukhuphelo lweHlabathi'
Umhlaba wakho okhutshelweyo ngoku uza kugcina kwifowuni yakho
Ukutshintsha ilizwe lakho kumdlalo, yenza nje oku!
Cofa uhlele ecaleni kwe-Realm world yakho kwaye ukhethe 'Buyisela umhlaba'
Kuza kubakho ukhetho lokuqinisekisa ukuba ufuna ukwenza oku, yithi uyakwenza kwaye ukhethe kuluhlu lwehlabathi oza kuthi unikezwe ngalo.
Khetha umhlaba kwaye uya kulayisha kwaye ulungele ukudlala!
Jonga ezinye zezona ntengiso zibalaseleyo kwimidlalo engezantsi:
Fumana umdlalo ongasikelwanga mda nge-Utomik iinyanga ezi-3 zobhaliso nge- $ 13.49
Thenga ubulungu beNintendo Shintsha kwi-Intanethi iinyanga ezili-12 nge- $ 14.99
Fumana uvavanyo lweentsuku ezili-14 zeXbox Game Pass Ultimate nge- $ 2.99
Fumana iPS kunye neenyanga ezili-12 kwiCDKeys nge- $ 43.99
Ndwendwela eyethu Ishedyuli yokukhululwa komdlalo wevidiyo yayo yonke imidlalo ezayo kwii-consoles. Jika ngeehabhu zethu ngaphezulu yokudlala kwaye iteknoloji iindaba.
Ukhangela into oza kuyibukela? Bona eyethu Isikhokelo seTV .
Umgca womsebenzi uthotho 5 isiqendu 4
I-amber davies kwisiqithi sothando
uphuma nini umnxeba omtsha womsebenzi
umhla wokuphindisela wokugqibela wokuphindisela uk
malunga nexesha (uthotho lweTV)